र्‍यापिड टेस्टिङ किट ठीक छ... :: विवेक राई :: Setopati
विवेक राई काठमाडाैं, चैत २३
परिषद अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले भने, 'आजको छलफलपछि यसको भ्यालिडेसनको काम जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गर्ने भयो। परिषदले अनुसन्धान पनि गर्दै जान्छ र उहाँहरूलाई चाहिएको सहयोग पनि गर्दै जान्छ।'
यसको 'भ्यालिडेसन' कसरी गर्नेबारे जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बोल्न चाहेन। निर्देशक डा. रूना झाले यसबारे सबै मन्त्रालयले नै बताउने जनाइन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले आफू छलफलमा सहभागी नभएको भन्दै यसबारे धेरै कुरा थाहा नभएको बताए।
परिषदकै एक सदस्यका अनुसार चीनबाट ल्याइएको किटको 'सेन्सिटिभिटी' ८४ प्रतिशत छ। यो भनेको सय जना पोजेटिभ संक्रमण भएका व्यक्तिको जाँच गर्दा ८४ जनाको मात्र पोजेटिभ देखाउन सक्छ। बाँकीको नतिजा गलत देखाउन सक्छ।
यही कुरा जाँच गर्न प्रयोगशालाले किटको 'भ्यालिडेसन' गर्दैछ। सरकारले यसअगाडि नै किटले काम नगरेको अवस्थामा फिर्ता गरिने जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, चैत २३, २०७६, २२:०६:००